आहा ! कस्तो मिलेको वडाअध्यक्ष दिउसै झ्याप हुनेगरि रक्सी खाने, सचिब चैं घुस खाने … पूरा हेरि शेयर गरौ – KhabarTime
१५ चैत २०७४ मा झापाको मेचीनगरका एक वडाअध्यक्षले गरेको हर्कत स्थानिय मिडिया, राष्ट्रिय मिडिया, र अनलाइनमा निकै भाइरल भयो । समाचार थियो मदिराले लठ्ठ भएर कार्यालय पुगेका वडाअध्यक्षलाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको । यस समाचारले नेपाल र भारतको सीमाना जोडिएको मेचीनगरको नाम देशैभरी छायो ।
त्यतिमात्रै होइन यी वडाअध्यक्षले नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लडेका प्राचार्यलाइ हराएका थिए । सो समयमा सामाजिक सञ्जाल तिर भोट दिने जनतालाइ लाजमर्दो भयो भन्ने आसयका धेरै स्टाटसहरु पढ्न पाइयो ।
त्यसको १० महिनापछि फेरी त्यही वडाका वडासचिव सेवाग्राहिसँग घुस लिएपछि पक्राउ परेका छन् । यसबारेमा झापामा रहेका हाम्रा सहकर्मी मित्र खगेन्द्र घिमिरेले एक स्टोरी तयार पारेका छन् । पढ्नुहोस विस्तृत विवरण ।
सेवाग्राहीँ बाट दश हजार घुस लिने वडासचिवको यसरी भयो पर्दाफास ! खगेन्द्र घिमिरे झापा ।
सेवाग्राही सँग नागरिताको सिफारिस बनाउने वहाना देखाउदैँ मेचीनगर नगरपालिका वडा न –२ का वडा सचिव सुरेश घिमिरेले मोटो रकम घुस लिएको पर्दाफास भएको छ ।
सोही वडाबासी पूर्णवहादुर तामाङकी श्रीमती सञ्जली तामाङको नागरिता बनाउे कागजी प्रकृया पुर्याउने वहानामा शुक्रबार बिहान ८ बजे कार्यालयमा बोलाएर पिडित बाट ९ हजार घुस लिएको आरोप छ ।
बिहिवार पूर्णवहादुर आफ्नी श्रीमतीको नागरिकता बनाउन वडा कार्यालय पुगे,अध्यक्षको आदेश लागिसकेपछि वडा सचिवमा निवेदन पुग्यो । त्यसपछि वडा सचिवले गाँउ सजिविन र प्रहरीको सजिविन गर्नु पर्ने र आमाको अभिलेख लिनका पूर्व बासस्थान रामेछाप पुग्नु पर्ने देखिएको हुँदा त्यो आफुले मिलाईदिने भन्दै पूर्णवहादुर सँग सचिव घिमिरेले १० हजार मागेका थिए ।
झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा न –२ का वडा सचिव सुरेश घिमिरेले मोटो रकम घुस लिएको आरोपमा प्रहरीले वडा कार्यालयबाट पक्राउ गरी नगरपालिका लैजाने क्रममा । तस्विर खगेन्द्र घिमिरे । कार्यालय बन्द भएपछि सचिव घिमिरेले तामाङलाई फोन गरेर त्यो कुरा कसैलाई भन्नु भएको त छैन् भनेर सोधेका थिए । उनले शुक्रबार बिहान भेट्न भने । सोही अनुरुप शुक्रवार बिहान ८ बजे वडाकार्यालयमा पैसा लिएर पुगेका तामाङले सचिव घिमिरेलाई म सँग नौ हजार मात्र भयो भनेर कार्यालय भित्र एक्लै भएको समय पैसा दिएको बताए ।
त्यस्तै गरी तामाङका विवाह दर्ताका लागि सचिव घिमिरेले १ हजार केहीँ समय अघि लिएका थिए । सो विषयमा शनिवार कुरा बाहिँर आयो । तामाङले वडा सचिबलाई पैसा दिएको कुरा उनका छिमेकीले थाहा पाए पछि मात्र घट्ना सार्वजनिक भयो । यस विषयमा कुरा बाहिर आएपछि सचिव घिमिरे आइतवार विहान वडाध्यक्षको पुगेका थिए । त्यपछि वडाध्यक्ष तिलक न्यौपाने सेवाग्राही तामाङको घरमा पुगेका थिए । उनले तामाङको घरमा पुगेर यो कुरा कुरा बाहिर नल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
यसरी कुरा बाहिर आईसकेपछि स्थानीय वडाबासीहरुले आईतबार बिहान देखिनै वडाकार्यालय घेराउ गरेका थिए । घुस खाने भष्ट्र कर्मचारीलाई कारवाहीको मागगर्दै आन्दोलित भएका थिए । सयौको भिड रहेको कार्यालयमा सेवागा्रहीले चर्को कर्मचारीको आलोचन गर्दा यस्तो कर्मचारीलाई जुत्ताको माला लगाउने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
घुस लिएको आरोप लागेका वडासचिव मलिन मुद्रामा । यस विषयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु अघि वडासचिव घिमिरेले आफुमाथि मिथ्य आरोप लगाएको बताए । उनले आफुले सेवा गरेको बताए । यसरी बिबादमा आएका घिमिरे माथि कारवाहीको माग राख्दै स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा र मेचीनगर नगरपालिका मा निवेदन दिएका छन् । कार्यालय परिषरमै पुगेर इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मेचीनगर नगरपालिका ल्याएको छ । धुलाबारी घर भएका वडा सचिब घिमिरे पैसा लिनकै लागि कार्यालय समयभन्दा २ घण्टा अगाडी वडा कार्यालय पुगेका थिए ।
यता मेचीनगर नगरपालिका ल्याएपछि स्थानिय सेवाग्राहीले नगरपालिका मेयर बिमल आचार्यलाई सचिव घिमिरेलाई कडा कारवाहीँको माग गरेका थिए । घुस लिने कर्मचारीलाई आफ्नो वडामा सचिव नपठाउन आग्रह गरे । यस विषयमा मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर बिमल आचार्यले पिडित सेवाग्राहीको कुरा र स्थानीयको कुरा सुन्दा धेरै कुरा प्रमाणित भईसकेको हुँदा नगरपालिकाले थप अनुसन्धान गर्ने र उनलाई घुस लिएको सबै कुरा प्रमाणित भए निलम्वन समेत हुन सक्ने बताए ।
खै के रहेछ र जिन्दगी? जन्मिदै अपाङ्ग भक्त विश्वासकाे २२ बर्षे कठिन मर्मस्पर्शी जीवन कथा भिडियो सहित हेर्नुस्
आजबाट शालिनदि लगायत देशैभर स्वस्थानी ब्रत कथा शुरू